Uhlu Lwezakhiwo: Izakhiwo Zokuthengisa Zezebhizinisi Amahhotela I-New South Wales Dubbo
Ukuqasha Emphakathini Wokuthatha Umhlalaphansi - Iyunithi Yombhangqwana Ngokudla Kwasemini Njalo. - UDubbo - Nsw
Ukuqasha Kumhlalaphansi Womphakathi - Iyunithi Yezithandani neLunch nsuku zonke. - I-Dubbo - I-NSWLe yunithi yezithandani ezisezingeni eliphansi inengxenye ye-Ingenia Gardens Dubbo, umphakathi ozimele wabantu abaqashe lapho uzozizwa wamukelekile futhi unenkululeko yangempela yokuthatha umhlalaphansi! Siyazi ukuthi uzohlabeka umxhwele: Lo mbhangqwana u ...
buka Izikhala zehhovisi eshicilelwe Izinyanga 2 edlule
IDubbo idolobha elisesifundeni sase-Orana eNew South Wales, e-Australia. Lesi yisikhungo esikhulu kunazo zonke esifundeni i-Orana, esinabantu abangama-38,392 2018 ngoJuni 144. Leli dolobha lisendaweni yokuhlangana yemigwaqo emikhulu yaseNewell, Mitchell neGolden. Idolobha eliseduzane, i-Orange, liqhele cishe ngamakhilomitha ayi-89 (275 mi). IDubbo itholakala cishe ngo-902 m (303 ft) ngaphezu kolwandle, 188 km (400 mi) enyakatho-nentshonalanga yeSydney (249 km (XNUMX mi) ngomgwaqo) futhi iyindlela enkulu yokuhamba nezitimela eya kwezinye izingxenye zaseNew South Wales. Kuxhumaniswa imigwaqo emikhulu esenyakatho neBrisbane, eningizimu kuya eMelbourne, empumalanga eSydney naseNewcastle, nasentshonalanga eBroken Hill nase-Adelaide. IDubbo ifakiwe esifundeni semvula nesimo sezulu sezulu seCentral West Slopes naseCentral West Slopes kanye namaThafa ahlukaniswe yi-Bureau of Meteorology.